Ngabe i-6G yesikhathi esizayo kanye nangaphezulu ibukeka kanjani ngezinhlelo zokuxhumana ku-5G? -News-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co, Ltd.
Ngabe i-6G yesikhathi esizayo kanye nangaphezulu ibukeka kanjani ngezinhlelo zokuxhumana ziye kwi-5G?
Isikhathi: 2020-04-17 Hits: 27
Ukusuka ku-1G kuya ku-5G, kusho ukusuka esizukulwaneni sokuqala kuya ohlelweni lokuxhumana lwesizukulwane sesihlanu, kepha i-5G ingukuvuselela kanye nokuqinisa ubuchwepheshe obukhulu. Isibonelo, amandla e-5G aphindwe ka-20 okuphindwe ngu-4G nama-10,000 izikhathi lelo 2G; ukusetshenziswa kwamandla ngakunye kuncishiswa izikhathi eziyishumi uma kuqhathaniswa ne-10G; ivolumu lehliselwe ku-4/1. Isiteshi sesisekelo esingu-3G sikhulu njengepotimende, singama-5 kg kuphela, Asikho isidingo sokwakha umbhoshongo omkhulu wensimbi. Ingafakwa izigxobo futhi ifakwe odongeni ngentando; vele, ingafakwa embhoshongweni omkhulu wensimbi okhona, futhi ngisho ne-20G ingafakwa kumgodi wokuhambisa indle. Ukufingqa kafushane, i-5G inezici ezilandelayo:
I-bandwidth enkulu: Amandla we-bandwidth we-5G makhulu kakhulu futhi anganikeza okuqukethwe okuningi kwencazelo ephezulu. Izindleko zingancishiswa ngesici esingu-100, ukuze abantu abajwayelekile bakwazi ukukhokhela ithelevishini enencazelo ephezulu, futhi isiko lithuthuka ngokushesha.
I-latency ephansi: Nge-5G, inkinga yokulibaziseka kwenethiwekhi ixazululwa ngokuyisisekelo.
I-Intanethi Yakho Konke: I-5G iyakwazi ukubona i-Intanethi Yakho Konke nganoma yisiphi isikhathi noma kuyiphi indawo, futhi kungukubamba iqhaza okuvumelanayo ngaphandle kokulibala, ukuze uqaphele ukuxhumeka kwezinto nezinto, izinto nabantu nenethiwekhi, ukuze kukhonjwe futhi kulawulwe.
Ukuvuselela kabusha ukuphepha: I-5G izokwakha kabusha uhlelo olusha lokuphepha, futhi kusungulwa nezinqubo zokuhamba ezinengqondo njengomhlaba, ulwandle nomoya, ezinganciphisa ngempumelelo ukubonakala kwengozi yomgwaqo.
Uma kune-5G, kuzoba ne-6G. Ngabe i-6G yangaphezulu noma ngaphezulu ibukeka kanjani?
Njengamanje, impendulo esemthethweni kakhulu ukuthi i-6G izocubungula futhi iqoqe ubuchwepheshe obuhlobene ne-5G obuphuthelwe.
Ngokombono wokuqonda okulula ukusiqonda:Ijubane lokulanda theoretical le-6G lingafinyelela ku-1000GB ngomzuzwana, okuphindwe izikhathi eziyi-100 lelo le-5G
Okwedlule: 4x4 Digital Illuminated Keypad Installed In "Carry On Books" Vending Machines
Okulandelayo: I-OEM Red Colour PTT Handsets Nezilokhi Zokulawula Ukufinyelela kusuka ku-SINIWO